Ny faniriana hanao firaisana ara-dalàna amin'ny fiaraha-miasa
Fantaro izay mampihomehy azy ireo
Tena fitiavana tsy lavorary
Ny fivarotan'ny fampahalalam-baovao nandritra ny taona maro ho toy ny fananahana ara-nofo dia ny fametrahana mpivady eo ambany fanerena goavana. Fotoana izao hanesorana ity tsindry momba ny fironana ara-pananahana ara-nofo amin'ny alàlan'ny horonan-tsary, radio sy TV.
Ny faniriana hanao firaisana ara-nofo
Famotopotorana, fako, fanandevozana: Toa efa lany tamingana ny firaisana ara-nofo any Blümchen hatramin'ny fahombiazan'izao tontolo izao amin'ny "Greens Shades of Grey".
Fancy sexual sex
Ao amin'ny dikan-naka sary Hollywood, ny voalohany Saro-kenatra sy tsy ampy traikefa Anastasia nifehy ny lozabe ho tsara tarehy koa miliaridera Gray Christian, izay nampahafantatra Anastasia amin'izao tontolo izao ny sadomasochistic isan-karazany.
Ny lohahevitra manankarena dia napetraka nandritra ny takarivam-potoana ary nanjary taha-marika ho an'ny fiainana ara-nofo mahafa-po hatramin'ny nanombohany niditra tao amin'ny tsena malalaka.
Koa satria afaka miditra ny amin'ny queasy fahatsapana iray sahady; rehefa afaka mampiseho izay manatanteraka faminaniana firaisana ara-nofo ny fiainana, tokony tena fantatra firaisana ara-nofo fanao efa nanandrana - na farafaharatsiny toy ny nomem-boninahitra Ampidironareo ao amin'ny fanitso, ny fomba fanaovana ny horonan-tsary sy ny mahery fo foana foana.
Andro, androany - na aiza na aiza hitodihanao, dia mahita olona lazaina fa marefo ianao, vatana mangatsiaka ary mamintina ny firaisana tanteraka. Mazava ho azy, ny tena zava-misy dia tena hafa tanteraka: ankoatra ny adin-tsain'ny fotoana fialan-tsasatra, ny asa sy ny tokantrano, matetika dia kely ny fotoana tavela na faniriana hanana firaisana ara-dalàna sy ara-dalàna. Ary koa, ny Vorturnen erotika izay azonao amin'ny fahitalavitra tsy tapaka vorgebetet, matetika dia lava fotoana lavitr'ezaka.
Ho solon'ireo mpivady manao firaisana ara-nofo dia mihiaka eo anoloan'ny telly. Mazava ho azy fa maro no manontany hoe: ny fifandraisantsika na ny fiainantsika ara-nofo dia manelingelina antsika? Manelingelina ny vady ve ny olona iray?
Ireo mpikaroka momba ny firaisana ara-pananahana ao Hamburg dia nahita tamin'ny fandinihana fa tena ara-dalàna izany ary tsy misy ifandraisany amin'ny taratra mahatsikaiky ataon'ny mpiara-miasa. Ny fifandraisana maharitra dia maharitra ny mpivady tsy mifankatia.
Mpivady vao haingana, tsy misy firy ny taonany, dia eo anelanelan'ny fe-potoana 10 isam-bolana. Ny olona ao anatin'ny fifandraisana maharitra dia manao azy io miaraka amin'ny hoe "fotsiny" amin'ny fotoana 4. Mahavariana fa mazava ho azy fa tsy misy dikany raha toa ka efa 5 na 25 taona ny fifandraisana. Izany dia noho ny fisian'ny fiovan'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny fifandraisana.
Ny fikarohana momba ny fitondran-tena dia manaiky fa, indrindra eo amin'ny dingana voalohany amin'ny fifandraisana, ny firaisana dia ampiasaina ho toy ny bindery mba hanambatra ny olona. Ny fifandraisana maharitra kokoa dia maharitra kokoa, arakaraka ny fijerin'ny firaisana ara-nofo ao ambadika - ny zavatra hafa mifantoka amin'ny fifantohana. Matetika àry ny fanontaniana dia mety ho marina izany.
Mazava ho azy fa tsy maintsy mazava tsara fa mbola tsy "izany" izany. Fa ny zava-misy dia miova ny fiainan'ny firaisana eo amin'ny fifandraisana. Ny fanontaniana raha miezaka ny manandrana toerana vaovao dia lasa mahalana.
Ny fanaovana firaisana ara-nofo dia tokony hahafinaritra azy ireo
Matetika ny lohahevitra dia mitodika manodidina ny mety amin'ny dysfunile erectile sy ny vitsika ary ny fomba hiatrehana izany. Sambatra ireo olona manana dokotera iray izay manana fahatokiana feno.
Ny tena zava-dehibe dia ny manaiky fa ny firaisana ara-nofo ataon'ny mpiara-miombon'antoka tsirairay dia tsy mitovy amin'ny iray izay nisy teo am-piandohan'ny fifandraisana. Raha ny marina dia manana tombony ihany koa izany, satria milaza ny manam-pahaizana fa ny firaisana ara-nofo eo amin'ny fiaraha-miasa maharitra, izay antsoin'ny olona hoe "firaisana ara-nofo" eo an-dalana, dia manao firaisana ara-pihetseham-po lalina.
Miara-miasa ireo mpiara-miasa mba hahitana ny karazana firaisana tiany hotontosaina ary inona ny nofinofy sy ny faniriany te-hanandrana. Firaisana ara-nofo mpitsabo mampitandrina manohitra mihevitra ho manana ho tafiditra ao anatin'ny fotoana toy izany onja be loatra avy any ivelany - dia tsy misy modely toy ny voalaza etsy ambony "Fifty matoatoa va ny Gray" na sary vetaveta ho hevitra.
Izany no lazaina fa mora kokoa noho ny vita, mazava ho azy, satria ny fiantraikany ara-pananahana dia miteraka isan'andro amin'ny olona tsirairay. Izany dia ny fanesorana tanteraka ny endriky ny votoaty erotic izay mahatonga ny olona ho eo ambany fanerena ara-pihetseham-po sy ara-tsaina. Ny iray dia mety tsy ho very ny fampitahana maharitra eo amin'ny tena sy ireo lazaina fa mpankafy ambony avy amin'ny haino aman-jery. Ary dia tokony ho mahafinaritra ny manao firaisana? Inoana.
Ny firaisana izay mahafinaritra dia miasa ho an'ny mpivady mahatsiaro tsara. Ireo mpivady ireo dia matetika mahita ny maha-lahy sy maha-vavy azy. Ny zavatra manan-danja dia ny fifampiresahanao sy ny filazanao am-pahamarinana ny zava-mitranga amin'ny lohanao. Mazava fa tsy mora foana ho an'ny rehetra izany.
Saingy, tsy misy fiteny mety ho an'ny sehatra ara-piraisana eo amin'ny kolotsaintsika, satria tsy misy kolontsain'ny kolontsaina eto amin'ity faritra ity. Tsy maintsy mazava tsara fa tsy afaka hianjera avy any an-danitra ny fanaovana firaisana. Ny eroticism dia tsy afaka ary tsy mipoitra tampoka tahaka ny volkano, eny fa na dia aseho amin'ny sarimihetsika foana aza. Ny firaisana ara-nofo dia mitaky ny hanaovana zavatra ho anao.
Misy fomba sy fomba samihafa amin'ny famolavolana ny fiainana ara-pananahana mba hahafahanao mahafa-po azy. Tsy mora foana izany, fa misy foana ny lalana.
Sex on schedule: Miandry anao ho tampoka ny herinao ary handresy ny fanirian-dratsy ianao dia ny famelan-keloka. Ny olona ankehitriny dia manomana sy manangana ny andro iray manontolo - ka maninona no tsy manao firaisana? Mazava ho azy, toa toa tsy mampidi-doza izany, saingy zava-misy fa ny firaisana tsy misy pentina dia tsara lavitra noho ny tsy fanaovana firaisana mihitsy.
Fifanakalozan-dresaka: Ny famolavolana drafitrasa mahatsikaiky dia mety ho lasa fitaovana ho an'ny fahafinaretanao manokana ny miresaka momba ny firaisana ara-nofo. Tahaka ny tsy anananareo ny sakafo mitovy amin'ny sakafo antoandro isan'andro, dia eo am-pandriana ihany ny fanaovana firaisana ara-nofo, mandritra ny fotoana lava sy manjavozavo. Ny fitadiavana toerana vaovao, manintona dia mety ho ny hafanana farany.
Manampy ny fotoana: Raha minitra vitsy monja dia mandalo ao anaty filma, mandra-piverin'ny mpanohitra am-pilaminana lavorary ao anaty fonon-koditra, raha ny marina dia hafa izany - ary zavatra tsara izany. Ny antsoina hoe "fitondran-tena mihamaivana" dia tanterahina amin'ny hetsika mazika, fa ny tena mahery. Mihamitombo haingana ny kalitaon'ny firaisana.
Misokatra amin'ny zavatra vaovao: Ny fitaomam-panahy avy amin'ny boky sy ny sarimihetsika dia tsy voatery ho ratsy. Zava-dehibe ny manao zavatra tsara avy amin'izany. Tsy voatery ho kofehy, karavasy ary afo mirehitra. Ohatra, afaka manomboka amin'ny fampifandraisana ny masonao fotsiny ianao. Izany dia miankina amin'ny karazana firaisana ara-nofo rehetra raha tsy misy afa-tsy ny hahatsapan'ny roa tonta. Noho izany dia tsara ny fanaovana firaisana ara-nofo, zava-dehibe ny tsy ekena mihitsy aza.